Etu ị ga-esi mee ka ngwa nbipute 3D gị ọsọ ọsọ na-enweghị adịkwa mbipụta | Akụrụngwa n'efu
Ọ bụrụ na ị hụtụla ọrụ onye nbipute 3D ma ọ bụ chee echiche banyere ịnweta mkpuchi na otu n'ime ihe mgbochi ntinye nke chere gị ihu bụ ọsọ nke ha na-arụ ọrụ. Ana m ekwu nke a ebe ọ bụ na nke a bụ atụmatụ nke, opekata mpe ugbu a, na-egbochi ụdị teknụzụ a ịnakwere ngwa ngwa.
N'iburu nke a n'uche, taa achọrọ m ịgwa gị gbasara mmelite ọhụụ nke ndị okike ya na-ezube iji dozie ọtụtụ mkpesa ndị nrụpụta niile na-etinyekarị tupu ha agba ụdị ụdị teknụzụ a ebe ọ bụ na ndị ọrụ injinia Michigan a jisiri ike mepee algorithm ohuru nke nwere ike ime okpukpu abụọ nke mbipụta 3D nke igwe ọ bụla.
Ekele maka ngwa ngwa ọhụrụ a, ọsọ nke ngwa nbipute 3D gị ga-abawanye nke ukwuu
Ikekwe akụkụ kachasị adọrọ mmasị na isiokwu a niile bụ na, site na ịwụnye mmelite a, onye ọrụ ga-ebipụta na 3D n'ụzọ ọsọ ọsọ na-enweghị nhụjuanya nke nsogbu anyị nwere ruo ugbu a, ihe niile metụtara ihe dị mfe dịka, mgbe na-aga ngwa ngwa 3D mbipụta akwụkwọ dara njọ nke ukwuu.
Dị ka e kpughere, o doro anya na n'ihi na otu ndị injinia a gbalịrị ime ka ngwa nbipute 3D dị ọnụ ala rụọ ọrụ ngwa ngwa. Nsogbu dị na nke a bụ na, n'ihi na ọ bụghị nke kacha mma, o jiri ọtụtụ ọkụ na akụkụ ndị ọzọ na-agbanwe agbanwe karịa ụdị ndị ọzọ, ihe na-emecha sụgharịa dị ka ihe atụ, site na ịbawanye ọsọ ọsọ opekata mpe, amalite inwe ịma jijiji, nke na-akpata ebipụta àgwà bụ nnọọ ogbenye.
Nke a bụ mkpụrụ nke mechara duga n'ọchịchọ ịzụlite ngwa ntanetị maka mbibi nke 3D a iji nweta algorithm nke nwere ike ịme ngosipụta nke ike nke onye nbipute 3D n'ụzọ ọ ga - enwe ike ịgbanwe ihe njikwa nke ngwa nbipute otú mitigating niile vibrations na ọ na-arụpụta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Nkọwa 3D » Etu ị ga - esi mee ka ngwa nbipute gị 3D dị ọsịsọ n’agaghị enwe ezigbo mbipụta
Wand Pi 8M, ihe ozo nke Raspberry Pi na Freescale processor
BlackFriday Deals na Electronics, 3D na-ebi akwụkwọ na ndị ọzọ na Free Hardware components